Imifanekiso eqingqiweyo ye-Ephemeral kunye nephelelwe lixesha kumbindi wendalo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UAndy Goldsworthy ngumkroli wase-Bhritane, owaziwa kakhulu kwicandelo lakhe, odala into ethile isebenza phakathi kwendalo ngeentonga kunye namatye ngoncedo kuphela lobuchule bakho kunye nale ndlela yokuqokelela izinto ezikungqongileyo.
Un Ubugcisa be-ephemeral kwaye oko kuhamba kuphela iintsuku kude kube yindalo ngokwayo enoxanduva lokuyiqhekeza okanye ukuyikrazula ngamandla omoya ngokufiphaza iifom ezenziwe ngulo mzobi waseBritane.
Goldsworthy, unyana wezibalo, Wakhula esebenza ezifama ngaphambi kokuba abe nethuba lokuqalisa umsebenzi wakhe kwiYunivesithi yaseCentral Lancashite. Njengoko esitsho, inxenye yomsebenzi wakhe yindlela yokukhetha iitumato ezigqwesileyo kwintengiso ukuze ukwazi ukuzidibanisa ngendlela evisisanayo kwaye ukwazi ukwenza loo misebenzi ungayifumana apha ngohlobo lweefoto.
Njengoko benditshilo, inxenye yomsebenzi weGolide efanelekileyo ephemeral kwaye iphelelwe lixesha, njengamagqabi emithi ethile ewa ekwindla. Kukwanengqondo ukubonisa ubu ethe-ethe beplanethi, nangona umzobo walo mkroli wase-Bhritane unezinye iinjongo ezintsonkothileyo.
«Xa ndenza into, ebaleni ngokwalo okanye kwisitalato sedolophu okanye edolophini, iya kunyamalala, kodwa kunjalo Inxalenye yembali yezo ndawo. Kwiintsuku zokuqala zomsebenzi wam ndagxila kwimbono yokuwa nokubola. Ngoku ezinye zolo tshintsho zenzekayo zinhle kakhulu ukuba zingachazwa.»
Mamaxesha amaninzis isebenzisa ukubakho kweminye yemisebenzi yakhe ukubashiya benjalo, njengoko kunjalo. UAndy Goldsworthy uneencwadi ezininzi ezipapashiweyo onokuthi ubuyele kuzo esi sixhobo, kwaye eyakho iwebhusayithi uyaphi kwinxalenye yomsebenzi wakho wobugcisa.
Umzobi waseBritani krola okusingqongileyo oko kumngqongile ukuze ngeentsuku yonke into ibuyele kwimeko yayo efanayo.
Umfanekiso oqingqiweyo ibonakale kwindalo yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukwenza imifanekiso eqingqiweyo embindini wendalo